Thengisa i-Bitcoin nge-I-MoneyPak | I-Paxful
Thengisa i-Bitcoin nge-I-MoneyPak
Manje sekulula ukuthengisa i-Bitcoin njengomdayisi we-Paxful. Unenkululeko yokubeka awakho amanani futhi kunezindlela zokukhokha ezingaphezu kwezingu-300 ongakhokhelwa ngazo lapho uthengisa i-Bitcoin. Njengoba i-Paxful iyimakethe ye-peer-to-peer, ungathengisa i-Bitcoin yakho ngokuqondile kubasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingu-3 emhlabeni jikelele. Inkundla yethu ikwenza kube lula kakhulu ngabasaqala kanye nomakadebona ukuba benze inzuzo.
Ukuze uthengise i-Bitcoin ngokushesha, vula i-akhawunti ye-Paxful noma ungene kuleyo osunayo kakade. Lapho usungenile, vele nje ulandele lezi zinyathelo:
Beka izimfuneko zakho – Khetha indlela yokukhokha oyithandayo kanye nenani eliphezulu le-Bitcoin ozimisele ukulithengisa. Ungase ukhethe nendawo okuyo kanye nemali oyithandayo. Lapho usuqedile, chofoza okuthi Funa Okuthengiswayo. Uzobona uhlu lokuthengiswayo olukahle ongakhetha kulo.
Buyekeza okuthengiswayo – Ngaphambi kokukhetha okuthengiswayo, qikelela ukuthi uhlola yonke imininingwane esemqoka ngomthengi, kuhlanganise kodwa akupheleli egameni lakhe, idumela, izinga lokuqinisekisa kanye nenani le-Bitcoin ngalinye. Lapho usuthole okuthengiswayo okufanele, chofoza okuthi Thengisa. Ngeke kuvule uhwebo okwamanje, kodwa kuzokuqondisa emigomweni nemibandela yokuhweba ebekwe umthengi.
Qala ukuhweba – Uma wanelisekile ngemigomo yomthengi, faka inani ozimisele ukulihweba bese uchofoza okuthi Thengisa Manje. Lokhu kuzovula ingxoxo yohwebo ebukhoma futhi kuthumele i-Bitcoin yakho ku-escrow yethu evikelekile. Funda iziqondiso ezinikeziwe ngokucophelela, bese uyazilandela. Lapho umthengi ephothula uhwebo ngakolwakhe uhlangothi futhi usuyitholile inkokhelo, ungayikhulula i-Bitcoin. Ungadawuniloda irisidi lomphakathi ngemva kohwebo.
Shiya ukuphawula – Ngemva kokuthengisa ngokuphumelelayo i-Bitcoin yakho, ungakhohlwa ukushiyela obuhwebelana naye ukuphawula kwakho. Lokhu kubalulekile enkundleni yethu ngoba kusiza ekhwakheni idumela lomsebenzisi.
Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, bukela ividiyo yethu echaza kahle indlela yokuthengisa i-Bitcoin ngokushesha. Ungasungula okokuthengisa i-Bitcoin ngokulandela isiqondiso zokusungula okuthengiswayo ku-Paxful.
Imakethe ye-Paxful peer-to-peer kulula ukuyisebenzisa, ivikelwe yi-escrow, futhi ifinyeleleka emhlabeni wonke. Qala ukuhweba namuhla!